Sarivongana roa hafa ankalazan’i Kazakhstan ny mpitarika azy · Global Voices teny Malagasy
Aleon'i Nazarbayev mahita fepetra ara-drafitra misimisy kokoa ho an'ny vahoaka
Voadika ny 07 Jolay 2021 5:29 GMT
Vakio amin'ny teny Esperanto , Español, Ελληνικά, English
Fanalàna sarona ilay sarivongan'i Nazarbayev tao Turkistan, atsimon'i Kazakhstan. Sary: governemantam-paritr'i Turkistan.
Raha mamily fiara avy any amin'ilay seranam-piaramanidina vao avy naorina ao Turkistana ka ho any afovoan-tanàna, mamakivaky ireo lemaka karankaina ao atsimon'i Kazakhstan, dia tsy tambo ho isaina ireo takelaka fiarahabana tongasoa sy ireo sary nahafantarana ilay Làlan'ny Lamba Landy fahiny. Isaky ny takelaka roa na telo, misy iray mampiseho ny sarin'ilay mpitarika ny firenena arahana iray avy amin'ireo teniny amin'ny fiteny Kazakh.
Tena zavatra hahataitra ireo mpizahatany sambany mankany, anefa, tsy mba ny sarin'i Kassym-Jomart Tokayev, filoha amin'izao fotoana ireo fa ny an'ilay teo alohany, Nursultan Nazarbayev.
Ny 5 Jolay, andro iray talohan'ny fitsingerenan'ny faha-81 taonany, nisy sarivongana alimo iray maneho an'i Nazarbayev nalàna sarona tao afovoan-tanàna. Tamin'izay fotoana izay ihany, tany Nur-Sultan renivohitra, nalàn'i Tokayev ny rakotry ny sarivongana iray hafa an'i Nazarbayev, mampiseho fa miely hatraiza hatraiza ary tsy azo hozongozonina ny fanindrahindràna olona atao an'ilay lazaina ho “Mpitarika ny Firenena,” na Elbasy, izay nitondra ny firenena nandritra ny taompolo telo.
Tokayev manala ny saron'ilay sarivongana alimo vaovao maneho an'i Nazarbayev ao Nur-Sultan renivohitra. Sary: Tranonkalan'ny Filohan'i Kazakhstan. Akorda.kz
Naverina narafitra i Turkistan, naorina ary nitarina, tsy misy hafa amin'i Nur-Sultan, fony teo ambany fitantanana sy fanarahamason'i Nazarbayev.
Taorian'ny namindràna ilay renivohitra tsy ho ao amin'ny tanàna atsimo ao Almaty intsony, fa natao ao amin'ny vohitra avaratra ao Tselinograd, nomena anarana vaovao hoe “Astana” ny foiben'ny governemanta. Ny fivoarana an-tanandehibe tao aminy dia nahitàna ireo tranobe vaovao marevaka sy fihitàrana vaovao manaraka ny morona “havia” amin'ny renirano Yesil. Tamin'ny Martsa 2019, andro iray taorian'ny fialàna tsy nampoizina nataon'i Nazarbayev, namoaka didy ny filoha mpisolo toerana, Tokayev, fa i “Astana” dia ho antsoina indray hoe “Nur-Sultan” ho fanomezana voninahitra an'ilay filoha teo aloha.
Ao Turkistan, efa tsy nahafaly ireo mponina tao an-toerana ny nanambaràna tamin'ny volana May ny hananganana sarivongana vaovao hankalazàna an'i Nazarbayev. Teny anaty media an-tambajotra no nipoitra ireo honohono momba ny fanorenana sarivongana alimo iray ho an'ilay mpitondra teo aloha.
Ankoatra izay, ny 25 May, tao anaty fanambaràna ampahibemaso iray no nilazan'i Bilal Çakıcı, tale lefitra ao amin'ny Fikambanana Iraisampirenena momba ny Kolontsana Turkic, fa ireo lova napetrak'i Elbasy dia tokony hankalazaina ao Turkistana, izay tsy ela akory izao no nohosorana ho “renivohitra ara-panahin'ny tontolo Turkic”.
Sosokevitra avy amiko ny hananganana ao afovoan'ny renivohitra ara-panahin'ny tontolo Turkic, ao afovoan-tanànan'i Turkistan, sarivongana iray ho an'ilay olona izay nitondra aina vao ho an'ny tanàna, sy fandraisany anjara tsy hay faritana tamin'ny fametrahana ny hevitra fampiatiana ny Turkic: i Nursultan Abishevich Nazarbayev.
Toy ny efa fahita mahazatra, nilaza ampahibemaso i Nazarbayev fa aleony fepetra miantoka ny firoboroboan'ny vahoaka, fa tsy sarivongana maro.
“Amin'ity taona ity i Kazakhstan no mankalaza ny faha-30 taonan'ny fahaleovantenany. Ary ny fanomezana lehibe indrindra ho antsika rehetra dia tsy tokony ho sarivongana na fiovàna anarana, fa fametrahana fepetra ara-drafitra manana kalitao avo lenta ikendrena izay hitahirizana ny firaisankinam-pirenena, ny fitoniana, ny fahasambarana ary ny firoboroboan'ny vahoakantsika,” hoy ny sampana mpifandray amin'ny gazety ao aminy raha nitatitra ny teniny.
Tany aloha tany, neken'i Nazarbayev ny hanomezana fotsiny ny anarany ho an'ilay oniversite manaraka ny fomba tandrefana, izay nisokatra tao an-drenivohitra tamin'ny 2010, hoy ny mpampita vaovao ao aminy.
“Tsy nanohana io hevitra io i Elbasy, na hafa tahaka izany tany aloha tany. […] Efa im-betsaka i Nursultan Abishevich no nilaza fa tsy ilainy ny endrika fanehoam-pitiavana tahaka izany. […] Ny hany fotoana teo amin'ny tantara nanekeny hanomezana ny anarany ho an'ireo tetikasa vaovao dia ny an'ny oniversite iray sy ireo sekoly fianarana,” hoy i Aidos Ukibai, sekreterany mpifandray amin'ny gazety.
Nandritra ny fitsidihana iray tamin'ny May, noderain'i Nazarbayev ny firoboroboana malaky misy ao Turkistan, tamin'ny nilazàny fa haingana kokoa noho ny ao an-drenivohitra ny fitomboany.
Nofinofiko ny hampiaina indray ilay tanàna ny tany amin'ny fankalazàna ny faha-1500 taonan'i Turkestan. Tsy nisy telo taona akory no lasa hatramin'ny nanorenana ny faritra tao Turkestan dia [tetikasa] 257 no voaorintsika. Tsy misy olona hanadino ny asa natao hanorenana ny renivohitra. Ny fahaterahana vavaon'ny tanànan'i Turkistan koa dia hetsika iray tsy ho hadinoina.
Kanefa, tsy miantoka ny fahatsaran'ny asa fanorenana ny fihazakazaky ny fampivelarana, araka ny nanamarihan'ireo mponina ao an-toerana azy taorian'ny nahitàna fihotsahan'ny ampahany tamin'ny rindrin'ilay trano vaovao Karavansaray.
Fanakianana nolavin'ny governoram-paritra, Umirzak Shukeyev, nolazainy fa tsy mitombina.
Tamin'ny taona lasa, foana noho ny fisian'ny COVID-19 ireo vinavina hanao fetibe hankalazana ny faha-80 taonan'i Nazarbayev. Tamin'ity taona ity, toa nameno ny banga tamin'ny alàlan'ireo sarivongana roa ireo mpitàna birao any amin'ny foibe sy any amin'ny faritra.
Raha fehezina, lasa firenen'i Nazarabayev kokoa hatrany i Kazakhstan. Lazainy mihitsy aza fa azy ny dera tamin'ny nananganana ampahany betsaka tamin'io izay niainga avy amin'ny tsy nisy.
“Ankehitriny dia toy ny ao anaty tontolo iray hafa mihitsy ianareo no mamily fiara, anaty tanàna iray hafa, izay tsy mbola nisy tany aloha,” hoy i Nazarbayev miresaka ny tanànan'i Turkistan. Nefa afaka niteny izany izy ho an'ireo tanàna hafa manana arabe mitondra anarana Nazarbayev, seranam-piaramanidina Nazarbayev, na oniversite iray mitondra anarana Nazarbayev.